चौतारीको २० औ स्थापना दिवस : क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार जिसीलाई प्रदान ! – ebaglung.com
चौतारीको २० औ स्थापना दिवस : क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार जिसीलाई प्रदान !
२०७४ माघ २२, सोमबार २०:३४	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७४ माघ २२ । यस बर्षको प्रेस चौतारी क्रियासिल पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार राम बहादुर जिसीलाई प्रदान गरिएको छ । प्रेस चौतारी नेपालको २० औ स्थापना दिवसका अवसरमा जिसीलाई पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो ।
प्रेस चौतारी नेपाल बागलुङ शाखाले स्थापना गरेको सो पुरस्कारबाट जिसीलाई १० हजार नगद सहित सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले सम्मान गरेका थिए ।
करिब डेढ दशक देखी पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील जिसीलाई ईलोक्ट्रोनिक तथा छापा माध्यममा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै संस्थाले सम्मान गरेको प्रेस चौतारी नेपाल बागलुङ्ग शाखाका अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङका पुर्ब अध्यक्ष समेत रहेका जिसी हाल धौलागिरी जागरण दैनिकको सम्पादक समेत हुन् ।
सम्मान पछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख पौडेलले पत्रकारिता मार्फत समाजको सम्मृद्धि र बिकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । पेशागत सुरक्षा र श्रमजिवी पत्रकार ऐनका लागि पत्रकारले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै नगरप्रमुख पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रको बिकासका लागि आफु सदा सकरात्मक भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासघंका पुर्ब केन्द्रिय सदस्य हरिनारायण गौतम, नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव लाल बहादुर थापा, ,प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सचिव रामकृष्ण शर्मा, सम्मानित ब्याक्तित्व राम बहादुर जिसी, नेपाल प्रेस युनियन बागलुङका सचिव संगम घर्ति मगर, प्रेस सेन्टर नेपाल बागलुङका अध्यक्ष राम थापा अबिरल र प्रगतिशिल पत्रकार सघं बागलुङका बिजय राना लगायतले शुभकामना मन्तब्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सम्मानित जिसीको ब्यक्तित्व बारे नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङ शाखाका अध्यक्ष दिल शिरिषले प्रकाश पारेका थिए । ज्येष्ठता निरन्तरता र क्रियाशिीलताको आधारमा प्रतेक बर्ष एक एक जना पत्रकारलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार छनोट समितिले जनाएको छ ।
सो अवसरमा प्रेस चौतारी बागलुङले नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङ शाखाको निर्माणाधीन भवनका लागि ५ हजार ५ रुपया आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ । सो रकम प्रेस चौतारीका अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङ शाखाका अध्यक्ष शिरिषलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रम प्रेस चौतारी नेपाल बागलुङका अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष नविन शिसिर बिकको स्वागत मन्तब्य र सचिव सृजना पन्तको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
क्षमता अभिवृद्धी तथा उदघोषण तालिमले महिलाहरुलाई सचेत, नैतिकतावान बनाउन सहयोग गर्छ – सुवेदी